Niteraka Fahatezerana Manerantany Ilay Mpanao Gazety Hongroà Nandaka Syriana Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2015 10:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, 繁體中文, Español
Nanjary iray amin'ireo olona hankahalaina indrindra ao amin'ny media sosialy ilay mpanao gazety Hongroà Petra Laszlo, taorian'ny fandefasana lahatsarary iray mampiseho azy mamingana sy mandaka mpitsoa-ponenana Syriana maromaro izay nandositra ny polisy tao Röszke, Hongria.
Tampoka tamin'ny Eoropeana ny krizin'ny mpitsoa-ponenana mba handaminana izany. Ary raha mbola very ao anaty adihevitra tsy misy fiafarana sy tsy mety tonga amin'ny fifanarahana ireo mpanao politika, mizarazara kosa ny olom-pirenena. Maro ny olom-pirenena manohana ny ezaka atao mba hanomezana fialokalofana ho an'ireo fianakaviana mandositra ny ady ankehitriny ary misy mihitsy aza ny sasany manome ny tranon'izy ireo manokana mba hampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana. Ny maro hafa kosa na izany aza, mbola miahiahy ary mahita ity “firohotra” ity ho toy ny loza mitatao amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina, sy ny fivavahan'izy ireo. Nandrisika ireo tahotra isan-karazany momba ny mpitsoa-ponenana ihany koa ny governemanta mpandala ny nentim-paharazana ao amin'ny firenena Eoropeanina sasany, anisan'izany ny Filoha Hongroà Viktor Orbán, izay vao tsy ela akory niampanga ireo mpitsoa-ponenana Miozolomana ho mampidi-doza ny Kristianina ao Eoropa.
Miala ao Tiorka tonga ao Eoropa amin'ny alalan'ny “lalana Balkan,” mandalo ao Gresy, Makedonia, sy Serbia ireo mpitsoa-ponenana Syriana. Rehefa tafiditra ao Hongria, tazomina ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Röszke izy ireo, izay ambenan'ny polisy Hongroà mafy. Manantena hihazo an'i Alemaina ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana, tsy noho izy firenena ahitana tombotsoa betsaka indrindra ao Eoropa, fa satria koa maro amin'izy ireo no manana fianakaviana na namana efa monina ao.
Maro tamin'ireo teny an-dalana hihazo an'i Alemaina ankehitriny no matahotra ny fampiharana ny Fitsipika Dublin, izay manery ny mpitsoa-ponenana hangataka fialokalofana na inona na inona firenena Eoropeana ahatongavan'izy ireo voalohany. Na dia efa nanaiky hampiato ny fampiharana ity fitsipika ity aza i Alemaina, tsy matoky ireo manampahefana ny mpitsoa-ponenana ka miezaka hihazo an'i Alemaina haingana araka izay azo atao mba tsy ho tratra eny an-dalana.
Tsarovy, #PetraLaszlo, tokony ho anisan'ireo mpitsoa-ponenana Hongroà ireo ny ray aman-dreninao. #1956
Ilay lehilahy nodakan'i #PetraLaszlo. Fantatra fa nampijaliana teo ambanin'ny fitondran'i Assad izy ary nandositra ny ISIS izy
Mampiseho mazava kokoa ny ahiahin'ny Eoropa momba ny firohotry ny mpitsoa-ponenana vaovao ihany koa ity tranga ity. Namela ity fanehoan-kevitra ity ny mpamaky iray ny gazety Frantsay antserasera 20minutes.fr :